Kuzophenywa olwezindlu eMbali | News24
Kuzophenywa olwezindlu eMbali
IMeya yomasipala Msunduzi uMnu Themba Njilo (kwesobunxele) kanye noNdunankulu wesifundazwe uMnu Willies Mchunu ngesikhathi beyohlola uhlelo lwezindlu e-Phase 4 eMbali Unit 13.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
UNDUNANKULU wesifundazwe saKwa­Zulu-Natal uMnu Willies Mchunu usethembise ukuthi uzokwenza uphenyo mayelana nohlelo lwezindlu olungakapheli namanje ekubeni laqalwa ngonyaka ka-1995 endaweni yaseMbali Unit 13 kanye nase-BB nokuyizindawo ezingaphansi kuka-ward 17.
UMnuz Mchunu ukuveze loku ngesikhathi ehambele le ndawo ngoLwesithathu olwedlule mhla zingama-26 kuMandulo (September).
UMchunu ubehola ithimba lakhe labongqongqnoshe eMgungundlovu njengoba kade beqhuba uhlelo lukaSukuma Sakhe nalapho besuke bebheka izinkinga ezikhungethe umphakathi komasipala abaehlukene.
UMacingwane uqale wahambela uhlelo lwezindlu olwakhiwayo eMbali nalapho efike wazwakalisa khona ukungenami ngendlela lolu hlelo oluhamba ngayo.
Ube esehambela ehholo laseMbali Unit 13 nalapho efike waxoxisana khona nomphakathi ngezinkinga obhekene nazo. Inkinga ebeyihamba phambili kulo mhlangano udaba lwezindlu njengoba umphakathi ubukhala ukuthi sekuphele iminyaka ulinde ukwakhelwa kanye nokulingiselwa izindlu zibe sesimweni esigculisayo.
Lo mphakathi ukhala ngokuthi zonke izinkampani ezifikayo ukuthi azizobakhela izindlu zifike zishiye phakathi zingaqedanga bese kuyama ukusebenza, kuphinde kufike enye futhi nayo iphinde ishiye kanjalo.
uNhlanhla Ngubane uthe inkinga ababhekene nayo enkulu ukuthi uhlelo lwezindlu seluthathe isikhathi eside kakhulu.
“Sivele sithi siyezwa kuthiwe inkampani ayisekho ibe ingaqedanga. Ayikho iminyango esingayihambanga sizama ukulubika lolu daba kodwa ayikho into eyenzekayo.”
uPinky Ntshulana wase-Phase 4 uthe : “Udaba lwezindlu luyasihlukumeza kakhulu. Thina ekhaya indlu isidilizwe kabili saphuma sayohlala emagobongweni ngoba sazi ukuthi ukulungiswa kwendlu kuzothatha amasonto ayisithupha kuya ezinyangeni ezimbili kodwa loko akuzange kwenzeke.
“Indlu yayingenawo ngisho uthayela phezulu sazizamela sawufaka lwaphinda labuya futhi uhlelo lokwakhiswa kwezindlu yadilizwa yaqede yangaqedelwa ukulungiswa yashiywa kanjalo.
Kwasiphoqa ukuba sakhe indlu ewurawondi esizohlala kuyona ngoba eyethu ibisadilizwa.Indlu esihlala kuyona kumanje ayinagesi, ayinamanzi futhi ayinayo nendlu yangasese. Nalapho kade sibeke khona izimpahala zethu kuyanetha sezimoshekile zonke.”
UNdunankulu Mchunu uthe uphoxekile kakhulu ngendlela uhlelo lwezindlu oluqhubeka ngayo kulendawo.
“Kunezindlu ezingamagebhu lana kodwa kunamabntu abahlala khona phakathi. Kunenqwaba yezindlu ezingalungisiwe lapha kanti indlela lolu hlelo lokwakhiswa kwezindlu oluqhubeka ngayo lushayisa ngamahloni.Sithanda ukuxolisa kulabo bantu abahlala kulezo zindlu ezikuleso simo. Abantu akumele engabe baphatheka ngalendlela.
“Lena into efuna ukulungiswa ngokushesha. Ngizohamba ngiyohlangana nongqongqoshe wezezindlu sifuna asichazele asiqalele phansi asitshele ukuthi imalini eseyisetshenzisiswe kulolu hlelo lwezindlu kusukela ngonyaka ka-1995 njengoba izinkampani ezakha lezi zindlu zishintshwashintshwa. Kuyimanje asazi ukuthi inkampani ekhona ikhokhelwa malini. Angeke size sisole muntu okwamanje kuze kube sekuvele iqiniso,” ubeke kanje.